သူပြေလည်ချိန်မှာ မစံစားခဲ့ရတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူအကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာမျှဝေလာတဲ့ ဧရာ - Cele Gabar
သူပြေလည်ချိန်မှာ မစံစားခဲ့ရတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူအကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာမျှဝေလာတဲ့ ဧရာ
November 20, 2020 - by Rainow
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ(၂၀) ရက်နေ့လေးကတော့ ဟာသပညာနဲ့ပရိသတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော်ဦးဧရာရဲ့ အသက်(၆၀) ပြည့်မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပါ။ သူကတော့ ပရိသတ်အတွက် သူတတ်ကျွမ်းတဲ့ဟာသပညာရပ်နဲ့ ဘဝအမောတွေဖြေဖျောက်ပေးဖို့ အသင့်ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လတ်တလောကိုဗစ်ကာလမှာတော့ ထီဆိုင်လေးဖွင့်ကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေပါတယ်။
ဒီနေ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရက်လေးမှာတော့ မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ မိဘနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ရာရာ့မွေးနေ့မှာ ကျေးဇူးရှင် ဖေဖေနဲ့မေမေ့ကို ရိုသေမြတ်နိုးလက်စုံမိုးလို့ ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမျှော်မာန်လျော့ကန်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာ…. ဖေဖေနဲ့မေမေကို လူပျိုပေါက်ဘဝကနေ ဖေဖေမေမေတို့နေဝင်ချိန်အထိ လုပ်ကျွေးခွင့်ရလိုက်ပေမယ့် သားအားမရခဲ့ပါဘူးဗျာ အထူးသဖြင့် မေမေကိုပေါ့ … သားပရိသတ်အချစ်ကိုရလို့ အိမ်ဌားဘဝကလွတ်ပြီ းဒီအိမ်လေးဝယ်နိုင်တဲ့အချိန်၊ ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ပြနိုင်တဲ့အချိန်၊စားချင်တာဝယ်ကျွေးနိုင်တဲ့အချိန်ကျမှ ဆုံရှုံးခဲ့ရတယ်မေမေရယ် ၊ဖေဖေကိုတော့မေမေဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း…အိမ်ဦးခန်းမှာထားပြီး တတ်နိုင်သမျှကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်… နောင်ဘဝဆိုတာများရှိခဲ့လို့လူပြန်ဖြစ်ခွင့်ရရင် ဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့သားပဲဖြစ်ပါရစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ. ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာပါတယ်။
သားသမီးတိုင်းကတော့ မိဘတွေကို အကောင်းဆုံးတွေနဲ့ ပဲ ကျေးဇူးဆပ်ချင်ကြမှာအမှန်ပါ။ ဦးဧရာကိုယ်တိုင်လည်း သူပြေလည်လာချိန်မှာမှ လူ့လောကက ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကို လုပ်ကျွေးပြုစုရတာ အားမရခဲ့ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရက်လေးမှာ မိဘနှစ်ပါးကို သတိရတမ်းတစိတ်နဲ့ ရေးသားမျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးနေ့ရက်လေးကစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာနဲ့ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်သွားနိုင်ပါစေလို့ ဆယ်လီကမ္ဘာမှာ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Rainbow – Cele Gabar
ဇီးထုတ်ပေါ်မှာပါလာတဲ့ သူ့နာမည်လေးကြောင့် ပျော်ရွှင်မိတယ်ဆိုတဲ့ ဇေရဲထက်
Previous Article သူနဲ့အတူ အဓိဌာန်ဝင်သူတိုင်းအတွက် လက်ဆောင်မဲလေးတွေဖောက်ပေးသွားမယ့် စမိုင်းလ်
Next Article JOOX မှာ ပြည်တွင်းခေတ်ပြိုင်အဆိုတော်တွေအားလုံးထက် အပြတ်အသတ်များတဲ့ Follower နဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ ရွှေထူး